Taliska Ciidanka Asluubta oo digniino soo saaray+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliska Ciidanka Asluubta oo digniino soo saaray+Sawirro
Taliska Ciidanka Asluubta oo digniino soo saaray+Sawirro
Muqdisho(SONNA)Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sareye Gaas Xuseen Xasaan Cusmaan oo shirjaraa’id uu ku qabtay magalada muqdisho oo ay garba joogeen Sarkiil ka tirsan Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed ayaa soo saray Amar ah inaan la dhisan kariirn dhulka ay leeyinhiin Ciidanka Asluubta.
Sareye Gaas Xuseen Xasaan Cusmaan ayaa xusaya in madama ay dhulka u baahanyiin Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo la doonayo in lagu Xananeeyo maxbiista Soomaaliyeed darteed aan la dhisankarin dhulalkaasi.
Taliyaha Ciidanak Asluubta Soomaaliyeed Cusmaan ayaa uga digay dadka in ay hantiidooda ku lumiyaan dhulka danta guud oo ay leeyihiin Ciidanka Asluubta,shaqsiyaadka doonayo in ay dhistaan dhulka Ciidanka Asluubta islmarkaana ka wantooban
Wuxuu intaasi ku daray Sareyo Gaas Xuseen Xasan cusmaan ayaa horay digniin ugu jeediyay shaqsiyaad ku hoowlanaa dhisida dhulka Ciidanlka Asluubta oo kaabiga ku haayo Isbitalka keysaney ee degmada karaan ee magaalada Muqdisho.
Muddooyinkii ugu dambeyeey ayaa waxaa jirtay dad isku dayay in ay dhistaan dhulka danta guud oo ay leedahay Dowladda Soomaaliya,waxaana jirta dad badan oo laga saaray dhul ay si sharci daro ah ku dhisteen.
Previous articleWasiirka Maaliyadda oo Maanta horgeyn doona Baarlamaanka Miisaaniyadda 2018-ka
Next articleQaar ka mid ah Dhaawacyadii Qaraxii Soobe oo maanta dib loogu celiyay Muqdisho